Guddoomiyaha Gobolka Sh/ Hoos ”Cadaaladda ayaan horkeyneynaa dadkii dhibka geystay” - Awdinle Online
Guddoomiyaha Gobolka Sh/ Hoos ”Cadaaladda ayaan horkeyneynaa dadkii dhibka geystay”
April 9, 2020 (Awdinle Online) –Degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacay kulan dhex-marey mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose,saraakiisha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida iyo Odayaasha dhinac kamid ah kuwa ku dagaalamay degmadaas.
Kulanka ayaa waxaa uu ahaa mid Guddiga isku dhafka ah ee Dowladda dhexe iyo Maamulka Koonfur Galbeed ay su’aalo ku weeydiinayeen Odayaasha labada dhinac Mashaqadii ka dhacay Wanlaweyn iyo Tuulooyinka hoos yimaada.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoos Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa ugu baaqay Odayaasha dhinacyada ay dirirtu dhex-martey inay ka fogaadaan waxkasta oo Colaad keeni karta.
Waxaa uu sheegay in iyagu ay rabaan cadaalad,isla markaana cidkasta oo dambi ka gashay dadka Shacabka ah ay Cadaaladda horkeeni doonaan,hayeeshee Odayaasha labada dhinac laga doonayo inaysan gadaal marsan dadka dambiilayasha ah.
Degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka dhacay dagaal toos ahaa iyo dilal kala gooni gooni ahaa oo la xiriirey aanooyin qabiil,iyada oo sidoo kale taasi ay sababtay dhacdooyin naxdin leh oo ay kamid ahaayeen in qof la gowraco kuwo kalena inta la dilo in meydkooda la gubo.
Previous articleDowlada Mareykanka oo ka hadashey geerida Abwaan Xudeydi
Next articleXisbiga Himilo Qaran oo Ku Guuleystay Dacwaddii ay Ka Gudbiyeen Hey’adda Duulista Soomaaliya